स्पेनी फिल्म निर्देशकहरु, जो सबैभन्दा प्रसिद्ध छन्? | मलाई फुर्सद दिनुहोस्
स्पेनिश फिल्म निर्देशक
गेब्रिएला मोरन | | सामान्य
सिनेमा संसार मा सबैभन्दा उच्च सम्मानित कलाहरु मध्ये एक हो, जो एक रोचक साजिश बिना अस्तित्व मा हुन सक्दैन। जे होस्, जे होस् हामी महान क्षमता संग एक असाधारण कहानी छ, केहि पनी धेरै एक निर्देशक को अपरिहार्य काम बिना हुनेछ। एक फिल्म निर्देशक को काम रेकर्डि direct निर्देशन र यो एक ब्लॉकबस्टर बनाउन छ। स्पेनिश सिनेमा प्रतिभा को एक धेरै छ र आज म तपाइँ को इतिहास को बारे मा एक सानो बताउनेछु मुख्य स्पेनिश फिल्म निर्देशक हामीसँग आज छ।
एक निर्देशक को मुख्य कार्यहरु मध्ये एक सबै कुरा को एक सानो गर्न को लागी छ! मूलतः उनी सही ढंगले निष्पादित र दर्शकहरु को लागी प्रासंगिक छ कि एक तरीका मा एक कथा पेश गर्न को लागी जिम्मेवार छ। यो एक आंकडा हो जसले मुख्य निर्णय गर्दछ, उदाहरण को लागी: एक स्क्रिप्ट लिने, साउन्डट्र्याक छनौट गर्ने, कलाकारहरुलाई निर्देशन दिने, प्रत्येक दृश्य को शटहरु को निगरानी र एक शूट को समयमा क्यामेरा को कोण। तर मुख्यतः आफ्नो दृष्टिकोण योगदान कसरी यो हो कि कथा वातावरण को शैली को निर्धारण को रूप मा आवश्यक को रूप मा कारकहरु संग भनिएको छ। तल मँ सबैभन्दा धेरै मान्यता प्राप्त स्पेनिश फिल्म निर्देशकहरु को तीन प्रस्तुत गर्दछु ताकि हामी उनीहरु को कुनै पनि फिल्म को दृष्टि गुमाउन छैन।
1 पेड्रो Almodóvar
2 अलेजेन्ड्रो आमेनबार
3 जुआन एन्टोनियो बायोना
4 स्पेनी फिल्म निर्देशकहरु को बाकी को बारे मा?
यसलाई जस्तो मानिन्छ आफ्नो मातृ देश बाहिर सबैभन्दा प्रभावशाली निर्देशकहरु मध्ये एक पछिल्लो दशकहरुमा। उहाँ Calzada de Calatrava मा 1949 मा muleteers को एक परिवार मा जन्म भएको थियो। उहाँ सधैं आफ्नो वरपर महिलाहरु द्वारा घेरिएको थियो, जो आफ्नो काम को लागी प्रेरणा को एक महान स्रोत हो। अठारह वर्षको उमेरमा उनी सिनेमा अध्ययन गर्न म्याड्रिड को शहर सारियो; तर विद्यालय भर्खरै बन्द भएको थियो। यो घटना Almodovar को लागी आफ्नो बाटो बनाउन शुरू गर्न को लागी एक बाधा गठन गर्दैन। उहाँ नाटकीय समूहमा प्रवेश गर्नुभयो र आफ्नै उपन्यास लेख्न थाल्नुभयो। यो १ 1984 ४ सम्म थिएन जब उनी फिल्म को माध्यम बाट आफुलाई चिनाउन थाले मैले यो योग्य को लागी के गरें?
उनको शैली स्पेनिश बुर्जुवा शिष्टाचार नष्ट गर्दछ किनकि उनी आफ्नो कामहरुमा वास्तविकता को प्रतिनिधित्व गर्दछन कि कहिलेकाहिँ सामाजिक मार्जिनलिटी को स्थिति संग आत्मसात गर्न को लागी गाह्रो हुन्छ। अत्यधिक विवादास्पद विषयहरुलाई सम्बोधन गर्दछ जस्तै: ड्रग्स, सावधान बच्चाहरु, समलैंगिकता, वेश्यावृत्ति र दुर्व्यवहार। तैपनि उसले कहिल्यै बेवास्ता गर्दैन विशेषता कालो र अपमानजनक हास्य। उनले अभिनेत्रीहरु कार्मेन मउरा र पेनेलोप क्रुजलाई आफ्नो मनपर्ने अभिनेत्री र म्यूज मध्ये एक मानीन्।
उहाँका मुख्य कामहरु मध्ये हामी पाउँछौं:
मेरी आमा को बारे मा सबै
म बस्ने छाला
उनीसँग कुरा गर्नुहोस्
मेरो रहस्य को फूल
उहाँ दुई ओस्करको विजेता हुनुभएको छ: १ 1999 मा "मेरी आमाको बारेमा सबै" लाई धन्यवाद र २००२ मा "उनीसँग कुरा गर्नुहोस्" स्क्रिप्ट को लागी धन्यवाद।। थप रूपमा, उनी धेरै गोल्डन ग्लोब्स, BAFTA पुरस्कार, गोया पुरस्कार र कान महोत्सव मा सम्मानित गरीएको छ। यो जोड दिन को लागी महत्त्वपूर्ण छ कि सर्वश्रेष्ठ स्पेनिश फिल्म निर्देशकहरु को एक हुनुको अलावा; उहाँ एक सफल निर्माता र पटकथा लेखक पनि हुनुहुन्छ।
स्पेनी मूल को एक आमा र एक चिली बुबा संग, हामी यो निर्देशक मा एक दोहोरो राष्ट्रीयता पाउँछौं कि उनी यस पल मा राख्छन्। उहाँ मार्च ३१, १ 31 1972२ मा सान्टियागो डे चिलीमा जन्मनुभएको थियो र अर्को वर्ष परिवारले म्याड्रिडमा जाने निर्णय गर्नुभयो। उनको रचनात्मकता एक धेरै सानै उमेर बाट विकसित गर्न थाले जब उनी महान देखाए लेखन र पढ्न को लागी माया, साथ साथै संगीत विषयहरु को रचना को लागी। उहाँ सबैभन्दा सफल निर्देशक, पटकथा लेखक र सातौं कला को लागी हाम्रो समय को संगीतकारहरु मध्ये एक मानिन्छ।
को Amenábar को पहिलो काम चार लघु फिल्म गठन 1991 र 1995 को बीच जारी। उनले १ 1996 in मा उत्पादन "थीसिस" बाट प्रसिद्धि प्राप्त गर्न थाले, एक रोमाञ्चक कि बर्लिन फिल्म महोत्सव मा आलोचनात्मक ध्यान आकर्षित र सात Goya पुरस्कार जीते। १ 1997 मा उनले "अब्रे लोस ओजोस", एक विज्ञान कथा फिल्म विकसित गरे जुन टोकियो र बर्लिन महोत्सवहरु लाई हरायो। यो कथानकले अमेरिकी अभिनेता टम क्रुजलाई यति प्रभावित पारेको छ कि उनले 2001 मा "भेनिला स्काई" शीर्षकमा एक अनुकूलन गर्ने अधिकार प्राप्त गर्ने निर्णय गरे।
महान अनुनाद संग निर्देशक को तेस्रो उत्पादन प्रसिद्ध फिल्म "द अदर्स" निकोल किडमैन अभिनित छ। र जुन २००१ मा थिएटरहरुमा रिलीज भएको थियो। यसले उच्च मूल्या and्कन र उत्कृष्ट समीक्षा हासिल गरेको छ; यो स्पेन मा यो बर्ष को सबैभन्दा धेरै हेरिएको फिल्म को रूप मा राखिएको थियो।
उनको सबैभन्दा भर्खरको फिचर फिल्महरु मध्ये एक हो जहाँ उनी एक निर्देशक को रूप मा सहयोग गर्दछन् २०१५ मा, "रिग्रेसन", जसमा एम्मा वाटसन र एथन हक ​​को अभिनय थियो।
केहि अन्य शीर्षकहरु उनले एक निर्देशक, निर्माता, गीतकार, वा अभिनेता को रूप मा योगदान दिए:
पुतली को जीभ
कसैलाई कसैलाई थाहा छैन
Amenábar को गोया पुरस्कार को एक ठूलो संख्या को अतिरिक्त यसको इतिहास मा एक ओस्कर पुरस्कार छ।
जुआन एन्टोनियो बायोना
उहाँ १ 1945 ४५ मा बार्सिलोना शहर मा जन्मनुभएको थियो, एक जुम्ल्याहा भाइ छ र एक विनम्र परिवार बाट आउँछ। म२० बर्ष को उमेर मा विज्ञापन र भिडियो क्लिप बनाएर आफ्नो व्यावसायिक क्यारियर शुरू गरे केही सांगीतिक ब्यान्डहरु। Bayona Guillermo डेल टोरो उनको सल्लाहकार को रूप मा मान्यता छ र जसलाई उनी 1993 Sitges फिल्म महोत्सव को दौरान भेटे।
र 2004, फिल्म "द अनाथालय" को पटकथा लेखक Bayonne लाई पटकथा प्रस्ताव गरीयो। फिल्मको बजेट र अवधि दोब्बर पार्नुपर्ने आवश्यकता देखेर, उनी गुइलेर्मो डेल टोरो को सहयोग लिन्छन् जो तीन बर्ष पछि कान्स महोत्सव मा रिलीज हुने फिल्म को सह-उत्पादन को प्रस्ताव गर्दछ। दर्शकहरु बाट जयजयकार लगभग दस मिनेट सम्म चलेको थियो!
निर्देशक को सबै भन्दा सान्दर्भिक कामहरु को अर्को नाटक Imp असंभव to संग मेल खान्छ नाओमी वाट्स अभिनीत र २०१२ मा रिलीज। कथानक एक परिवार र त्रासदी हो कि २००४ हिन्द महासागर सुनामी को समयमा बाँचिरहेको कथा बताउँछ। यो फिल्मले स्पेनमा अहिले सम्मको सबैभन्दा सफल प्रीमियरको रुपमा स्थापित भएको छ, उद्घाटन सप्ताहन्तमा .2012. million मिलियन डलर कमाई गरेको छ।
थप रूपमा, २०१ 2016 मा फिल्म "एक राक्षस मलाई हेर्न आउँछ" स्पेन मा प्रीमियर भयो। ठूलो आश्चर्य जब प्रसिद्ध निर्देशक आउँछ स्टीवन स्पीलबर्ग 2018 मा जुरासिक वर्ल्ड को अन्तिम किस्त निर्देशित गर्न Bayona छनौट गर्छन्: "फलन किंगडम।"
स्पेनी फिल्म निर्देशकहरु को बाकी को बारे मा?
एक शक बिना, त्यहाँ उदय मा कलाकारहरु को एक धेरै छन्। हामी जस्तै निर्देशक पाउँछौं Icíar Bollaín, Daniel Monzón, Fernando Trueba, Daniel Sanchez Arévalo, Mario Camus र Alberto Rodríguez जसलाई हामीले ट्रयाक गुमाउनु हुँदैन। उनको काम उनको प्रस्तावहरु संग उद्योग भित्र एक नाम प्राप्त गर्न शुरू हुन्छ।
फिल्म निर्देशकहरु एक बजेट मा निर्भर गर्दछ, कथाहरु को रचनाकारहरु को भाग मा केहि प्रतिबन्धहरु को अतिरिक्त। तैपनि उनको काम कुनै छायांकन कार्य को रीढ़ हो। यो एक सही कला हो सही ढंग बाट व्याख्या र अन्य दर्शकहरु लाई उनीहरुलाई ठूलो दर्शकहरु लाई व्यक्त गर्न को लागी अनुकूलन र सफलता मा बदल्न को लागी अनुकूलन!
लेखको पूर्ण मार्ग: मलाई फुर्सद दिनुहोस् » सामान्य » स्पेनिश फिल्म निर्देशक
सबै भन्दा राम्रो रोमान्टिक श्रृंखला